Wood Plastic WPC muchina huni epurasitiki muchina - China Qingdao Hegu Wood-Plastic
Tsananguro WPC zvigadzirwa.
Tsananguro wpc zvigadzirwa:
1, New chigadzirwa: The huni-mapurasitiki ari mhando itsva chakaita zvokugadzirwa zvinhu kuburikidza nedanho nokusanganisa, exruding, calibrating, hualing kure uye nokuveza,
2, Material: anoshandisa PVC, PP, Pe nebwe kana zvishandiswezve chikweshe uye chirimwa faibha (huni upfu, hundi, mashanga etc.) sezvo mbishi zvinhu.
3, Advantages: mhando iyi yematanda-epurasitiki akanyatsojeka akafanana ne dzinongoitika huni chitarisiko uye kunzwa, asi vane unhu kwete chete sezvo nehuni excisable, planeable, sawable, unmatched kubata, pasi mwero bibulous, zvakanaka mwando nemishonga, mothproof , nokuvhuva nemishonga, nemishonga zvakanaka asidhi uye alkali, Anti ngura, uye ane chinhu moto nemishonga. The zvigadzirwa vane dzisiri chepfu, vasiri kusvibisa, zvakatipoteredza-ushamwari uye kuponesa-energied, pasina formaldehyde, benzene uye amoniya uye nezvimwe zvinhu zvinokuvadza.
4, Application: The huni-epurasitiki zvigadzirwa vari zvinowanzoshandiswa pauriri panze, pedyo rokuvaka mvura, nhurikidzwa, nzvimbo mapurani, macheya uye mabhenji, inodiwa, mukati madhoo uye mahwindo, fenicha, etc.
WPC Profile michini / WPC muchina extruder / huni epurasitiki ematongerwo Machine
WPC huni epurasitiki sezvamunoita muchina kusanganisira chisanganiso,
matanda Miller, WPC granulator, WPC Profile extrusion mutsetse,
sanding muchina, kwokugeza mazino muchina, nekusimbisa, nebefu muchina,
WPC conical kaviri sikuruu extruders,
WPC decking dzaFord muchina.
WPC muchina / huni epurasitiki rinoumba muchina / wpc rusvingo Panel extrusion mutsetse
WPC dzaFord pamwe conical kaviri sikuruu extruder
huni epurasitiki ematongerwo muchina / Plastic huni WPC Machine
Production kuyerera huni epurasitiki WPC decking Machine
1, Kugadzirira acho:
huni upfu zvinhu: 80-100mesh huni upfu, rinogona kuitwa kubva huni sawdust, mupunga pamateko, mupunga mashanga, gorosi pamateko uye uswa, donje staw uye kurima wastage. muchina kudiwa huni Kupwanywa uye pulverizer muchina
epurasitiki zvinhu: zvishandiswezve PP / Pe mapurasitiki pashure Washing nekuodza kupinda flakes. muchina kudiwa epurasitiki Washing uye unorema mutsetse.
2, WPC zvinhu vaiitawo uye granulating
Nokusanganisa: akaisa zvose mashoko munzvimbo vaiitawo muchina, akadai PP / Pe zvishandiswezve flakes, huni upfu, mishonga yokuvirisa
Granulating: zvakakosha kushandisa yepamusoro granulating muchina kuti WPC granules, mwando exhuasting maitiro anodiwa granulating rikurumidze.
3, WPC zvinogadzirwa extrusion-Kuumbwa-pose kurapwa
Extrusion uye Kuumbwa: Our conical kaviri sikuruu extruder iri zvikuru rakagadzirirwa yepamusoro WPC zvigadzirwa extrusion anogona WPC zvinhu zvizere vakavhengana uye ikavhunduka uye yunifomu, kushongedza pamwe deisgned muforoma zvakanaka uye calibration, online nokuveza mudziyo, redu Wood epurasitiki WPC Profile muchina anogona kuti zvakanaka WPC zvigadzirwa, akadai decking prodfiles, bindu Profiles, cheya Profiles, pergoza Profiles, nokutuka hurongwa profiles.
Pamusoro kurapwa: sanding, kwokugeza mazino uye nekusimbisa, nebefu kwacho kunogona kuita WPC zvigadzirwa vane hunhu yemapuranga zviyo zvakanaka zvinogamuchirwa vatengi.
A kunovhengana rwokuzvarwa matanda epurasitiki faibha nokuumba huni-epurasitiki chinoumbwa. Izvi kubatsira pakuderedza zvinonyatsorehwa kurema motokari, uye ivowo, izvozvo runogonesa yayo mafuta kunyatsoshanda. Wood epurasitiki chinoumbwa vari yakaderera akatemerwa mutengo uye eco ushamwari chinotsiva kuti mupurasitiki simbi zvinoumba rokuvaka zvikumbiro. Nokudaro, avo kudiwa inongogara kukura mumusika.
Huni-epurasitiki chinoumbwa musika ari segmented ne mhando: Polyethylene (Pe), Polypropylene (PP), Polyvinyl Chloride (PVC) uye vamwe. Polyethylene inobva huni epurasitiki chinoumbwa zvakazadza indasitiri. Chivako & kuvaka zvinogadzirwa chidimbu anoonekwa kuva kupfuura mutengi kuti Polyethylene uye Polyvinyl Chloride huni-epurasitiki chinoumbwa. The motokari zvinoriumba chidimbu anouya inotevera apo huni-epurasitiki chinoumbwa zvinoshandiswa kuita lightweight motokari zvinoriumba
Kuvakirwa chikumbiro chavo, musika ichi chave segmented kupinda chivakwa & okuvaka zvigadzirwa, decking, fence, maindasitiri & nevatengi nhumbi, motokari zvinoriumba, uye vamwe. Pakati izvi, imba uye kuvaka chidimbu akazviratidza sezvo pakukura pazvitsuwa zviri munyika yose huni-epurasitiki chinoumbwa pamusika.
Previous: Wood Plastic WPC muchina WPC decking co-extrusion mutsetse
Next: Wood Plastic WPC muchina wpc musuo Machine
Wpc chisanganiso Machine
16-63mm PVC mutopota extrusion mutsetse
4.5 mm - 11 mm pakukura nokukurumidza rusvingo chete C ...